Wararka - Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale
Dugsiyada Aagga Robbinsdale waa degmo ku guuleysatay abaalmarin u heellan heer sare ee tacliimeed ee DHAMMAAN ardayda. Waxaan u adeegnaa dhammaan ama qaybo ka mid ah toddobo magaalo oo ay ku nool yihiin in ka badan 100,000 oo ku nool xaafadaha waqooyi-galbeed ee Minneapolis, Minnesota.
Bilow - Dhamaad
Barnaamijka Tacliinta Xagaaga ee K-8 - Isdiiwaangali bisha Meey 14keeda!
Maajo 4 2021
Ku dardar-galinta barashada barnaamijka waxbarashada xagaaga ee Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale! Shaqsi-ahaan iyo kal-fadhiyo muuqaal ah ayaa la bixin doonaa bilaha Juun iyo Luulyo ee ardayda hadda ku jirta Xannaanada illaa fasalka 8-aad.
Qalabka Xisaabta Iibiyaha Carwada
3 Meey 2021
Dugsiyada Robbinsdale Area waxay qaadan doonaan agab waxbarasho oo cusub oo loogu talagalay Xisaabta K-12. Booqo carwadda qof-iibiyaha ah, Maajo 3-5 - ama carwada internetka, Maajo 1-10.
Isdiiwaangeli Hada Kulliyada 4 Caruurta Akadeemiyada Xagaaga
Kuleejka 4 Caruurta - Akadeemiyada Xagaaga ee Virtual waa barnaamij bilaash ah ardayda soo galeysa fasalka 6aad ilaa 8aad. Barnaamijku wuxuu ardayda dugsiga dhexe u muujiyaa dariiqooyin xirfadeed oo kala duwan.
Mashruuca Sheeko-qorista Qoraalka Qoyska oo isku keenaya ardayda
Sheeko-sheegiddu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah akhris-qorista, iyadoo aan loo eegin luqadda uu qofku ku hadlo. Taasi waa sababta macallimiinta barnaamijka Akhriska Qoyska ee loogu talagalay dadka waaweyn ee wax barta iyo carruurta da'da dugsiga xannaanada ay u soo saareen mashruuc u gaar ah, iskaashi ardayda.
Abriil 29 Baro Wargeys
Abriil 29 2021
Eeg wararkii ugu dambeeyay ee lagu soo daray wargeyskeena Discover family iyo community!
Macallinka fasalka labaad ee Lakeview Elementary School Susan Cunningham ayaa loo magacaabay Macallinka Sanadka ee 2021 Xiriirka Macallimiinta Robbinsdale.
Warsidaha Hoose ee Lakeview
Robbinsdale Redesign, Wada Shaqeynta Adeegyada Qoyska ee Degmada, Abaal Marinta Gobolka
Robbinsdale Redesign, oo ah wada shaqeynta adeegga qoyska ee degmada, ayaa dhowaan ku guuleysatay abaalmarin gobolka dadaalkeeda ka hortagga xadgudubka iyo dayaca carruurta.
Armstrong Senior wuxuu kasbadaa Dhibcaha ACT oo Fiican
Dugsiga sare ee Armstrong Mio Aoki-Sherwood wuxuu gaadhay guul aad u tiro yar oo arday ah oo wadanka oo dhan gaadhay: dhibco fiican oo ku saabsan imtixaanka ACT.
Warsidaha Dugsiga Sare ee Armstrong
Warsidaha Khadka Tooska ah
Bayaanka warbaahinta oo baabi'inaya wararka xanta ah ee laxiriira dhacdada Dugsiga Dhexe ee Plymouth
Bayaanka soo socda ayaa lala wadaagi doonaa warbaahinta si loogu dadaalo in meesha looga saaro wararka xanta ah.
Diiwaangelintu waxay ka bilaabmaysaa 28-ka Abriil 2021-22 Naadiga Tacliinta ee Sannad Dugsiyeedka
Naadiga Adventure waa Barnaamijka Daryeelka Carruurta ee Da'da Dugsiga ee Dugsiyada Aagga Robbinsdale. Waxa jira dhawr meelood oo ku habboon dugsiyada degmada ee loogu talagalay ardayda dhigata fasalka barbaarinta carruurta illaa fasalka shanaad.
Daadinta Xanta ku saabsan Dhacdada Dugsiga Dhexe ee Plymouth
Laga soo bilaabo Dr. Burrage: Maanta waxay u sii socotaa maalin ku adag ardayda iyo shaqaalaha Dugsiga Dhexe ee Plymouth. Waxaan warqad kuugu soo dirayaa si aan uga takhaluso wararka xanta ah ee ku dhex maraya baraha bulshada oo siyaabo kale loola wadaagi karo.
Macluumaadka la cusbooneysiiyay ee ku saabsan dhacdadii hubka ee maanta ka dhacday Dugsiga Dhexe ee Plymouth.
Qorshayaasha Xagaaga? Hubi Hore Adventures, Adventure Club ama The Basement
Abriil 22 2021
Haddii aad raadineyso qaabab aad mashquul ugu noqon karto ardaygaaga xagaagan, hubi barnaamijyada wanaagsan ee laga heli karo Waxbarashada Bulshada! Waxbadan ka baro Naadiga Dalxiiska (Xanaanada ilaa fasalka 5aad) iyo The Basement (fasalka 6aad ilaa 8aad).
Barnaamijka Dugsiga Dhexe ee STEAM Oo Bilaabanaya Sannad Dugsiyeedka Soosocda
Abriil 20 2021
Guddiga Dugsiga ayaa oggolaaday qorshe lagu bilaabayo barnaamij cusub oo dugsi dhexe ah oo 'STEAM' ah oo laga bilaabayo dayrta sannad-dugsiyeedka 2021-2022.
Iskuulka Injineerinka & Farshaxanka
Waqtiyada bilowga iskuulka si loo badalo sanad dugsiyeedka 2022-23
Bishii Diseembar 2020, Guddiga Dugsiga ayaa u codeeyay in la beddelo waqtiyada bilowga dugsiga, laakiin ma aysan go'aamin goorta isbeddelku dhacayo. Kulankii Isniinta, Abriil 19, Guddigu wuxuu si aqlabiyad leh ugu codeeyey in isbeddel la sameeyo laga bilaabo sannad dugsiyeedka 2022-23.
Abriil 15 Baro Warsidaha
Abriil 15 2021
Laba ka mid ah Waayeelka Dugsiga Sare ee Armstrong oo loogu magac daray Gabagabadii Abaalmarinta Qaranka
Armstrong waayeelka Mio Aoki-Sherwood iyo Matthew Spickelmier ayaa loo magacaabay Finalka Abaalmarinta Qaranka.